रंगीन संसार देख्दाको क्षण - Tulsipur Online
रंगीन संसार देख्दाको क्षण
Posted by Admin | २२ जेष्ठ २०७६, बुधबार १३:१३ |
निरला अर्याल गैरे, तुलसीपुर
२२-जेठ / हामी पाँच मिनेटसम्मका लागि चिम्म ग-यौ, भने कतिबेला पाँच मिनेट पूरा होला र आँखा खोलौंला भन्ने आतुर हुन्छ । यो शब्दमा उतार्दा र पढ्दा त्यति गहिरो नलाग्दा र गम्भीर रुपले सोँच्दा मानसपटलमा तरंग नै ल्याउछ ।
हामीलाई पाँच मिनेट त आँखा बन्द गर्न आकास थामे झै लाग्छ, भने मानिशले कसरी जीवनभर बन्द आँखासंग जविन विताउछ, होला । यसको अनूभुति गर्न हामीले नसकौंला किनभने हामीसंग दुईवटा आँखाका ज्योति सकुसल छन्, तर दुबै आँखाका ज्योति गुमाएका मानिशहरुको अनुभूति सन्दा निकै उकुसमुकुस हुन्छ ।
राप्ती आँखा अस्पताल रक्षाचौरले अहिले ति दुबै आँखाको ज्योति गुमाका मानिशलाई आँखाको ज्योति प्रदान गर्दैछ । यस्तै दुबै आँखा देख्नसाथ दाङको बबइ गाँउपालिका ३ का ८० वर्षीय लिले वलीको ओठमा अहिले चाउरिएका गाला र फाटेका ओठमा मिठो मुस्कानले मुहारको स्वरुप नै परिबर्तन भएको थियो ।
मेरो संसार हराभरा सुन्दर छ , अध्याँरोबाट उज्यालो पाउँदा मेरो खुसीको सीमा छैन शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दीन उनले भने– म जस्ता धेरै वृद्ध वृद्धाले संसार देख्न पाउन उनले आर्शिवाद पनि दिए । यो सब कारण लिले वलीको मोतियाविन्दु भएको आँखाको शल्यक्रिया र जलविन्दुको उपचार नै हो । वर्षौबाट गुमेको नजर पाउँदा खुसीको सीमा छैन् अब आफैं चर्पी जान सक्ने भएँ उनले भने –अब त नातीनातिनीलाइ घुमाउँछु, घरको काम पनि गर्न सक्छु ।
“यो भन्दा पहिला कहिल्यै आँखाको चेकजाँच गरेको थिइन अहिले चेकजाँच गर्दा दाँया आँखामा मोतियाविन्दु देब्रे आँखामा जलविन्दु भएको थाहा पाँए” वलीले भन । अव जलविन्दुको पनि ३ महिना पछि डाक्टर सावले आउनु भन्नुभको छ । जलविन्दु भएको आँखा को शल्यक्रिया भयो भने फेरी गाइ बाख्रा चराउने घाँस हाल्न पनि सक्छु भन्दै खिस्स हाँसे । बुढो पनि भइयो अब यतिकै मर्ने त होला भनेको मर्ने बेलामा यस्तो पनि देख्नुपर्ने भयो आश्चर्य चकित हुदैं भने – मेरो आँखा बनाउने डांक्टरलाइ, राप्ती आँखा अस्पताललाइ र ।
बबइ गाँउपालिकाका धेरै धेरै आर्शिवाद र धन्यवाद पनि दिन भ्याए । कान कम सुन्ने वलीका छोरा विदेश छन् बुहारीको सहारामा राप्ती आँखा अस्पतालमा तुलसीपुरमा आएका हुन् । सोही गाँउपालिका निवासी ७२ वर्षका कविराज विक पनि आँखाको शल्यक्रिया पश्चात निकै खुसी छन् । दुवै आँखा मातियाविन्दुका कारण राम्रो संग नदेख्ने विक अहिले बाहिरी सुन्दरता देख्न पाएका छन् ।
आँखा सम्बन्धी कुनै ज्ञान नहुँदा यस्तो समस्या सीर्जना हुन्छ । चेक जाँच नगरी वस्दा यो हालत हुने बताउँछन् बुढाबुढी भएपछि सबैको समस्या हो भन्ने विक अहिले बबइ गाँउपालिकाले ठुलो धर्म गरेको बताउछन् । उनको दुवै आँखाको शल्यक्रिया गर्नुपर्ने सुझाव डाक्टरले दिएका छन् एकै पटक दुवै आँखा शल्यक्रिया गर्दा बढी दुखाइ हुने
डरले केही महिना पश्चात पुन. अर्को आँखाको शल्यक्रिया गर्न आउने विकको भनाइ रहेको छ ।
उमेरले करिव तीन दशक पुग्न लागेकी कलशी खत्री पनि उही पात्र हुन जो आँखाको समस्याबाट वर्षैादेखि पीडित भएकी थिइन् । अव त मेलापात गर्न सक्छु, श्रीमानको
हेरचाह पनि गर्न सक्छु उनले भनिन – छोराछोरी सबै आफ्नो आफ्नो घर समालेर बसेका छन् के दुख दिनु । खेती किसानी गरेरै जीविको पार्जन गर्ने खत्री आँखा देख्न छाडेपछि मनले हरेस खाएको बताइन । अव त आँखाले संसार देख्न पाँए खेतबारीमा अन्न उब्जाउँछु गाँइ भैसी पाल्छु । मेरो कारणले श्रीमानले धेरै दुख पाउनुभएको थियो अव त हुन दिन्न उनले भनीन् ।
गाँउ घरमा गएर सबै दाजुभाइ तथा दिदि बहिनीलाइ निरन्तर रुपमा आँखाको चेकजाँच गर्नु पर्छ भनेर सल्लाह दिने प्रतिवद्धता पनि गरेकी छन् । बबइ गाँउपालिकाका खिम बहादुर वलीको पनि खुसीको सीमा छैन् । तपाइलाइ कस्तो अनुभुती भएको छ बा भनेर सोध्दा – उनले खित्का छाडेर हाँस्दै भने –कालो वस्तुलाइ सेतो देखेपछि खुसी हुदैैनन त । दुवै आँखा मोतियाविन्दु भएका वलीको दाँया आँखाको शल्यक्रिया भएको छ भने वाँया आँखाको शल्यक्रिया गर्न तीन महिना पछि आउन नेत्र विशेषज्ञ डा. सन्तोष शर्माले सुझाव दिएका छन् ।
आँखा नदेखेर मर्ने दिन आउने होकी जस्तो लाग्थ्यो मलाइ तर आज गुमेको ज्योति पाएँ उनले भने हामी माथी ठुलो गुन लगाउने सबैलाइ धन्यवाद पनि दिएका छन् । ७१ बर्षीय जीव कुमारी वली र ६८ वर्षका हिरालाल विक पनि आपसमा कुरा गरेर दङ्घ देखिन्थे । उनीहरुको यी सबै कारण आँखाको ज्योति आउनु नै हो । उनीहरु दुवै विगतमा आँखा नदेख्दाको दुखका कुराहरु एक आपसमा गरिरहेको थिए । “हामी औधी खुसी छौं” एकै लयमा भने राप्ती आँखा अस्पतालका डाक्टर पनि कति राम्रा मिठो बोलेर हामीलाइ अप्रशेन गर्नुभयो जीव कुमारीले भनिन् ।
अस्पताल पनि त्यस्तै राम्रो सफा सुग्घर अझ अर्को कुरा त भन्न भुलेछु यहाँ विरामी र कर्मचारीले प्रयोग गर्ने चर्पी पनि एउटै कति राम्रो भेदभाव पनि छैन् प्रंससा गदै भनिन । बबइ गाँउपालिकाको आर्थिक सहयोग र राप्ती आँखा अस्पताल रक्षाचौर दाङको प्राविधिक सहयोगमा भएको आँखा शिविरमा बबइ गाँउपालिकामा ७ सय पचास जनाको आँखा चेकजाँच भएको राप्ती आँखा अस्पालका नेत्रसहायक तथा बाह्य कार्यक्रम संयोजक शालिकराम गौतमले जानकारी दिए गौतमका अनुसार अनुसार चेकजाँचका क्रममा ९८ जनाको मोतियाविन्दु भएको पता लागेको थियो ।
सोही अनुसार राप्ती आँखा अस्पतालका नेत्र विशेषज्ञद्धय डा सुरेश रसाइली र सन्तोष सुवेदीको सक्रियतामा शल्यक्रिया गरि मंगलबार निशुल्क चश्मा तथा औषधी वितरण गरेको राप्ती आँखा अस्पतालका प्रशाशकीय अधिकृत किरण पौडेलले जानकारी दिए । चेकजाँच गरेर मोतियाविन्दु पत्ता लागेका मध्ये अझै १४ जना विविध कारणले अस्पालमा नआएको बताइएको छ ।
बबइ गाँउपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले बाँकी रहेका विरामीहरुलाइ शल्यक्रियाको लागी अस्पतालमा पठाउने बताएक छन् । रएका मध्ये १मोतियाविन्दु भएका अप्टोमेट्रिष्ट ओम प्रकाश यादव, नेत्र विशेषत्र रमेश गिरी, सपना गौतम र ल्याव टेक्निसीयन सन्तोष शर्माको सहभागीताम औषधी तथा चश्मा वितरण गरिएको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।
Previousदंगीशरण राष्ट्रपती रनीङ्ग सिल्ड प्रतियोगिता सुरु
Nextदाङमा सवारी दुर्घटना हुँदा ६ यात्रु घाईते